Beanjara Paul : “Paipaika politika ny fanitsiana lalàmpanorenana” | NewsMada
Beanjara Paul : “Paipaika politika ny fanitsiana lalàmpanorenana”
“Mahita izahay fa paipaik’ady politika hoentin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao hipetrahana moramora eo amin’ny fitondram-panjakana no hanitsiana an’io lalàmpanorenana io.“, hoy ny filohan’ny antoko Sehatra fampandrosoana ny demokrasia (SFDM), Beanjara Paul.
Fantatra fa ny tsy azoazon’ny mpitondra no hovainy : ny hialan’ny filohan’ny Repoblika roa volana mialoha ny fifidianana, raha hirotsaka hofidina izy.
Rehefa miala eo ny tena, tsy mahazo fahefana. Mety hanahirana ny hibaiko amin’ny fitantanan-draharaham-panjakana entina hangalatra amin’izany. Raha miala eo ny tena, veloma fa mety tsy ho tafaverina intsony, araka ny fanazavany.
Tsy maintsy hovain’ny fitondrana ny fametraham-pialan’ny filoham-pirenena. Tsy maintsy io lalàmpanorenana bingo sy tsy mifanitsy amin’ny tombontsoam-bahoaka amin’izao fotoana izao io no kitikitihina amin’izay tsy mahamety amin’ny mpitondra. “Raha izay no hatao, manahy ny hisian’ny korontana eto izahay“, hoy izy. Satria maro no tsy hanaiky izany raha atao amboletra.